Better HR မြန်မာစျေးနှုန်း | ဝန်ဆောင််မှုအပြီးအစီး
Features အားလုံး အပါအဝင်
အနည်းဆုံး အယောက် ၂၀
See all options about Better HR pricing
Better HR ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ
Better HR ရဲ့ အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်တွေက သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်စီမံမှုတွေကို ပိုမိုမြန်ဆန် ထိရောက်လာစေနိုင်ပါတယ်
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Dashboard မှာ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။ Management team အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရုံးတက်ရုံးဆင်းအချိန်တွေ မွေးနေ့ နှစ်ပတ်လည် အချိန်ပိုဆင်းတာတွေ ဝန်ထမ်းအရေအတွက် စသဖြင့် သိရှိနိုင်ပါတယ် ။
Better HR နဲ့ဆို ကိုယ့်ရုံး area နားရောက်ရင် GPS လေးဖွင့်ရုံနဲ့ easy check-in feature နဲ့ attendance တင်နိုင်သလို ကိုယ်ရှိတဲ့ နေရာကနေ မြေပုံနဲ့ တကွ ကိုယ့် ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ line manager ဆီ manual attendance request လှမ်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် scan check in နဲ့ ရုံးအတက်အဆင်း မှတ်တမ်းတွေကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသေးတယ်။
အချိန်ပို ဆင်းတဲ့ နေ့တွေမှာလည်း date ၊ ဆင်းတဲ့ အချိန်စတာတွေကို တိတိကျကျ ကိုယ့်ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ manager ဆီ request လှမ်းတင်နိုင်ပါတယ် ။
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ခွင့် အမျိုးအစား ခွင့်ရက် ကန့်သတ်ချက် စတာ တွေကို company ရဲ့ policy အတိုင်း စိတ်ကြိုက် Better HR နဲ့ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် ။
လကုန်လို့Payroll လစာတွက်တဲ့အခါမှာလည်း အချိန်ပိုလုပ်အားခ၊ နောက်ကျကြေးနဲ့ လစာမဲ့ခွင့်စတာတွေကို အလိုအလျှောက်တွက်ပေးပြီး ဥပဒေနဲ့အညီ Tax နဲ့ SSB ပါအတိအကျတွက်ပေးတဲ့အပြင် ဝန်ထမ်းတွေ အချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်နိုင်အောင် pdf payslip ပို့ပေးပါသေးတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ခွဲဝေချထားပေးတဲ့ ပစ္စည်း စာရင်းတွေကိုလည်း စနစ်တကျ သေသပ်စွာ နာမည်နဲ့တကွ မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပါတယ် ။
ရုံးတွင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဖုန်းဆီ တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုက်ပါတယ် ။ OT, leave request တွေကို ခွင့်ပြုပေးတာ ငြင်းပယ်လိုက်တာ စတာတွေကို ဝန်ထမ်းသာမက management team ကိုပါ Better HR inbox က တစ်ဆင့် အသိပေး နိုင်ပါတယ် ။
Simplify HR processes with Better HR
Thanks for filling your information. We will contact you within 1 working day.
Follow Us - Facebook / LinkedIn / Twitter